Nei mwenje yakatungamirwa yakasviba uye yakasviba?
Wese munhu ane hupenyu hwakadai Chiedza cheLED chakangotengwa chinogara chakajeka, Asi mushure menguva, mwenje mizhinji inozosviba uye yakasviba, Nei mwenje we LED uine maitiro akadaro? Ngatiende newe kuzasi nhasi! Tsvaga kuti nei magetsi ako eLED ave kudzikira Tinofanirwa ...
Kurongeka kweSmart Lighting, Sustainable Innovation
Frankfurt Lighting Fair pasina mubvunzo ndiyo imwe yematanho akanakisa emakambani emwenje. Anan mwenje inoratidza runako rweChinese brand kune vese pasirese vakafunga iyi ine simba kwazvo chikuva. Kubva pakurwisa kwakasimba kwechiedza chetsika, kusvika kukurumidza kutsva kwekuvhenekera kwe LED, kusvikira zvino ...
Kudiwa uye rutsigiro rwematongerwo enyika, tarisiro yemwenje yemwenje inogona kutarisirwa
Inotungamirwa nekushomeka kwechikafu nemushonga wekupa zvinodhaka zvinokonzerwa nedenda repasi rose, angave musika weNorth America wekurima zvirimwa zvekurapa, kana musika weEuropean wekurimwa kwemukati mefekitori yemiti semuriwo, mavise nemichero, pamwe nekuwedzera. ..